Wararka - Qalabka mashiinka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'electromagnetic xajin' astaamaha waxqabadkiisa iyo mabda'a shaqada
Qalabyada mashiinka maaskaro maaddada koronto-ku-qabsiga xajista astaamaheeda waxqabadka iyo mabda'a shaqada
Astaamaha waxqabadka iyo mabda'a shaqada ee xajinta elektromagnetic ee qalabka mashiinka maaskaro. Xakamaynta elektromagnetic waa qalab wax soo saar muhiim ah ee mashiinka maaskaro. Qalab wanaagsan oo elektromagnetic ah wuxuu hagaajin karaa waxtarka shaqada ee mashiinka maaskaro oo wuxuu badbaadin karaa shirkadda xooggeeda iyo kharashka agabkeeda. Haddii aad rabto inaad doorato mid fiican oo xajin ah Electromagnetic, waa inaan fahamnaa astaamaha waxqabadkiisa iyo mabda'a shaqada.
Qalabyada mashiinka maaskaro maaddada koronto-ku-qabsiga ku qabsada astaamaha waxqabadka
Marka hadda la daaray, xoog magnet ayaa la soo saaraa ka dibna saxanka "armature" ayaa hawl gala. Xajintu waxay ku jirtaa gobolka ku hawlan. Marka hadda la gooyo, gariiradda ma tamar iyo "armature" waa la soo furay, oo xajintu waxay ku jirtaa xaalad kala bixid ah.
1. Isu imaatin fudud iyo dayactir: Waxay iska leedahay qaabka ma guurtada ah ee gariiradda birlabtu ku duuban tahay kubbadda, sidaas darteed looma baahna in la soo saaro xuddunta dhexe ama la isticmaalo burush kaarboon ah, waana ay fududahay in la isticmaalo.
2. Jawaab-xawaare sare leh: Sababta oo ah waa nooc qalalan, Xuddunta ayaa si dhakhso leh loogu gudbiyaa, ficillo ku habboon ayaa lagu gaari karaa.
3, cimri dherer xoog leh: kuleyl wanaagsan oo daciifa, iyo adeegsiga agab horumarsan, xitaa soo noqnoqoshada sare iyo isticmaalka tamarta sare, waa mid aad u waara.
4, ficilku runtii waa: isticmaalka ilo ilo saxan u eg, in kastoo ay jirto gariir xoog leh ma soo saari doono dabacsanaan, adkeysi wanaagsan.
Mabda'a shaqada ee xajinta elektromagnetic ee mashiinka maaskaro: qaybta firfircoon iyo qaybta la wado ee xajinta elektromagnetic waxay isticmaashaa khilaafka u dhexeeya dusha xiriirka, ama u isticmaal dareeraha sida dhexdhexaadinta gudbinta (isku xidhka Haydarooliga), ama isticmaal gudbinta magnetic (xajinta elektromagnetic) ) si loo gudbiyo Xuddunta ayaa u oggolaaneysa labada in ay si ku meel gaar ah u kala baxaan, oo si tartiib tartiib ah loo hawlgeli karo, labada qayboodna waa la isku wareejiyaa iyada oo la isu jawaabayo inta lagu jiro gudbinta.
Mabda'a shaqada ee xajinta elektromagnetic ee qalabka mashiinka maaskaro
Falanqaynta mabda'a hawlgalka ee xajinta elektromagnetic-ka qalabka mashiinka maaskarada: Dhamaadka mashiinka spline ee mashiinka wadista waxaa lagu qalabeeyaa saxanka isqabqabsiga ee firfircoon, kaas oo si xor ah ugu socon kara jihada axial. Sababtoo ah isku xirnaanta khadadka, waxay isku shaandheyn doontaa mashiinka wadista. Saxanka khilaafku kaxeeyo iyo saxanka khilaafka wadista ayaa si isdaba joog ah loo dhejiyay, qaybta isugeynta ee cirifka korena waxay ku dhegsan tahay shaadhka lagu rakibay qalabka la wado, markaa saxanka khilaafku wuxuu raaci karaa qalabka la wado, mana wareejin karo marka usheeda wadista wareegaya. .
Marka gariiradda ay firfircooni gasho, taarikada khilaafku waxay soo jiidanaysaa xudunta birta, garbaha ayaa sidoo kale la soo jiitaa, saxanka khilaafkoodana si adag ayaa loo cadaadiyaa. Waxay kuxirantahay khilaafka udhaxeeya sayidkiisa iyo taarikada is riix riixa, qalabka la dhaqaajiya wuxuu ku wareegaa shaarka wadista Marka gariiradda la demiyo, guntinta ilkuhu waxay ku rakiban yihiin inta u dhexeysa taarikada khilaafaadka gudaha iyo dibaddaba waxay soo celinayaan armature-ka iyo taarikada khilaafaadka, xajmiguna wuxuu luminayaa saameynta gudbinta xaddiga. Mid ka mid ah dhamaadka gariiradda waxay gashaa awoodda DC iyada oo loo marayo burush iyo giraan giraan ah, dhamaadka kalena waa lagu salayn karaa.